DEG-DEG: Mid Kamida Xiddigaha Ugu Khibrada Badan Manchester City Oo Ka Baxay Kooxdaas & Halka Ay U Badan Tahay Inuu Tagi Doono - Gool24.Net
DEG-DEG: Mid Kamida Xiddigaha Ugu Khibrada Badan Manchester City Oo Ka Baxay Kooxdaas & Halka Ay U Badan Tahay Inuu Tagi Doono
Kooxda Manchester City ayaa ku dhawaaqday inuu kooxdeeda ka baxayo goolhayaha ree Chile ee Claudio Bravo kaas oo mudo afar sano ah kusoo qaatay gegida Etihad Stadium isla markaana koobab badan kusoo guulystay wakhtigaas.
Bravo ayaa xagaagii 2016 iskaga soo dhaqaaqay Barcelona waxaana uu ku biiray Man City oo isla wakhtigaas kahor uun tababare u magacawday Pep Guardiola oo ilaa hadda hoggaan u ah.
Guardiola ayaa doonayay goolhaye si wanaagsan ugu ciyaari kara lugta oo baas wanaagsan xaga dambe kasoo dhisi kara maadaama oo ay falsafadiisu baas ku salaysan tahay.
Claudio Bravo ayaa wada muujin waayay xilli ciyaareedkiisii koowaad wixii laga filayay oo dhan waxaana ay taasi qasabtay in 2017 uu Pep markale suuqa u galo goolhaye hanaankiisa ciyaareed fahamsan isaga oo Benfica kala soo wareegay Ederson Moraes.
Bravo ayaa la filayaa kaddib ka bixitaankiisa Etihad inuu dib ugu laaban doono dalka Spain gaar ahaan kooxda horyaalka La Liga qaybta ka ah ee Real Betis.
“Qofkasta oo jooga Manchester City waxa uu jeclaan lahaa inuu Claudio uga mahad celiyo afartiisa sano ee kooxda uu joogay wanaan oo dhan ayaananu uga rajaynaynaa isku dayadiisa mustaqbalka” ayaa lagu yidhi bogga Twitter-ka ee City.